22 desambra – Trinitera Malagasy
I Sam 1, 24-28 / I Sam 2, 1-8 / Md Lioka 1, 46-56
Ny vakiteny voalohany dia mampianatra antsika fa fanomezan’Andriamanitra izay rehetra eo am-pelantanantsika, eny fa na dia ny taranaka aza, ka fahamarinana ny mahafoy azy manontolo ho an’ny Tompo. Ny tononkiran’i Anà raha tsy voadinika tsara dia toa manambara Andriamanitra mila voatsiary, ka manetry ny manana ary manandratra ny mahantra, mamelona sy mamono araka izay tiany. Mazava ny hafatra tian’ny mpanoratra hampitaina amintsika: mahefa ny zavatra rehetra izy, ary ny fahasambaran’ny olombelona no sitrany.
Nahoana ary no mbola misy mitrongy nefa tsy mihinana akory? Nahoana no mbola misy matin’ny hanoanana, matin’ny aretina… aiza izy no to amamela ireny ho faty eny? Eo izy, isika rehetra no antsoiny ho fanomezam-boninahitra ny anarany. Firifiry ny fahefana mpanjaka sy fiketrahana mihaja tolorany ireo ory (salamo setriny)? Saingy mazana lasa fanararaotam-panjakana ny ankamaroan’ireny, ka vao maika manampy trotraka ny fahorian’ireo izay mijaly.
Narindran’i Md Lioka ho tononkira ny fiainan’i Masina Maria, ary hiraintsika isan’andro izany: notsilovin’Anidriamanitra ny fahambaniantsika, nahefa asa mahery tamin’ny sandriny izy, ary nahefa zava-dehibe amintsika tsirairay avy. Inona tokoa ary y zavatra notanterain’Andriamanitra ao amintsika? Inona ny fahasoavana atobany amintsika? Izay mahatsapa izany ihany no afaka hankalaza azy. Raha tsy izany dia ho fanompoan-tsampy ny vavaka ataontsika, tsy fiderana fa fidradradradrana, hitalahoana valisoa sy fanambinana. Na mbola tsy mangataka aza anefa isika dia efa fantany izay mahasoa. Ray Andriamanitra ka mitsinjo ny zanany rehetra.
Tsy hoe sanatria niangaran’Andriamanitra i Masina Maria fa asehon’ny Fiangonana kosa ho modely, ka na teo aza ny ngidim-piainana natrehiny tety amin’ity tany fandalovana ity, dia ny voninahitry ny lanitra kosa no valisoa nomena azy satria “zanaka mendrika andova ny fanjakana izy”, nino sy natoky mandrakariva ny fitiavan’ny Ray.
Izany finoana izany no hahafahana mihira ny tononkiran’i Maria eto am-pamakivakiana ity tany “lohasahan-dranomaso” ity. Ny Litorjian’ny Eglizy dia manentana ny zanany rehetra hiventy ny Tonon-kiran’i Maria isan-kariva, hibanjina ny asa lehibe notanterahin’Andriamanitra nandritra ny andro, ka hamarana ny andro amin’izany hafaliam-po izany, mahita fa tanteraka tao amin’ilay zanakavavin’i Siona ny fampanantenan’Andriamanitra. Tsy ny vokatry ny asantsika fa ny asan’Andriamanitra vokatry ny fitiavany antsika no maha-velon-kira.
Asa fito araka ny fitanisan’i Maria:
(1-) ny voalohany dia ny sandriny mahery natsotrany mba hanavotra izay very (Det 5, 15). Andriamanitra irery ihany no afaka handresy ny ratsy sy ny fijaliana vokatr’izany ary tsy ny fijaliana sy ny fahafatesana tambin’ny ota no ho tompon’ny teny farany fa ny fitiavana mamelon’aina;
(2-) mampiahaka ny mpiavonavona Izy dia ireo izay mihevitra ny ho avotra sy ho sambatra noho ny herin’ny tenany, tsy sanatria tsy akory hampitsanga-menatra azy ireo fa kosa hampibebaka ny fony ho amin’ny fitiavany;
(3-) nahongany ny mpifehy ary
(4-) nasandrany ny ambany: tsy sanatria fivadihan’ny rasa izany, tsy hanova na inona na inona amin’ny sehatry ny tantara, izany hoe tsy tonga hanova ny mpilalao tantara Andriamanitra fa hanova mihitsy ny fomba fitantarana, ny fifandraisan’ny olombelona amin’izy samy izy, ka hifaninana ho ambany, ho mpanompo araka ny fon’Andriamanitra;
(5-) ny noana hovokisany
(6-) fa ny mpanan-karena kosa ampodiany mitondra tanam-polo: tsy misy hitondra na inona na inona hiala amin’ity tany ity afa-tsy ny harena nohariantsika teo anatrehan’Andriamanitra, izany fahamarinan’Andriamanitra izany no hahafeno hafaliana ny zanany miharitra ny tsy rariny noho ny hafa;
(7-) miahy Andriamanitra ary ampahatsiahivin’i Masina Maria antsika fa tsy miova mandrakizay ny fitiavany. Mandrakizay no hisaorantsika azy.
Hanomana ny fontsika hankalaza ny noely anie ny fitaninsana isan’andro ny zavatsoa ataon’Andriamanitra ho antsika.